TSY MANAIKY « BILETA TOKANA » HATAO ATSY MAORISY ISIKA ! – MyDago.com aime Madagascar
Nitohy teny amin’ny kianjan’ny finoana Magro Behoririka androany ny hetsiky ny vahoaka mpomba ny Ankolafy Ravalomanana. Toy ny mahazatra dia nisy hatrany ny lahateny maro samihafa nataon’ny mpitarika ny hetsika. Ny Ct Feno dia nilaza fa fitaovana ampiasian’ny frantsay hanakorontanana ny fiverenan’ny filoha Ravalomanana, ny fahatongavan’ireo delegasioana avy amin’ny COI eto amintsika. Tsy maintsy hialohavana fitoniana hoy izy ny fanatanterahana ny fifidianana. Mbola dinihana miaraka amin’ny Cenit ny lafiny teknika amin’ny fanomanana izany fifidianana izany raha mety amintsika. Noho izany hoy Feno dia aoka isika tsy ho voarebirebin’ireny olona ireny. Nambarany ihany koa fa ny firenena rehetra dia mitady ny traikefan’ny filoha Ravalomanana. Betsaka noho izany hoy izy ireo nandrabiraby vola azy, fa tsy nekeny izany. Ny zavadehibe aminy dia ny fanampiana ny vahoaka efa mijaly. Nanamafy ihany koa ny Ct Manoela fa tsy misy mahavita afa-tsy ny filoha Ravalomanana eto. Mahakasika ny bileta tokana nolazain’ny COI fa izy ireo no hanatonta izany dia nambaran’i Manoela fa misy kajikajy ataon’ny Cenit ao toy ny tatsy Maorisy. Ny zavamisy hoy izy dia rehefa tiana holaniana ilay anaran’ny olona tianao dia afaka telo dia mivoaka izany. Noho izany dia tsy manaiky izany isika, fa ny Malagasy manana taratasy, ka isika ihany no manatonta azy. Ny any amin’iny faritra Androy iny, hoy ity mpanao politika ity, dia betsaka ireo olona no tsy mahay manao ny lavotondrony akory.Mila mailo isika manoloana izany. Ny Cst Rodin dia nanambara fa vita ny fanadianana bakalorea. Mampalahelo hoy izy; ny zanaka Malagasy, vokatry ny fanonganam-panjakana. Ny zavamisy dia tsy tafiditra eny Ankatso akory ireo mpianatra afaka tamin’ny herintaona, kanefa ny eo mibosesika ihany. Ka ho aiza izany ireto zanaka Malagasy ireto. Mahatsiaro ny filoha Ravalomanana hoy izy, ny zanaka tantsaha.Raha namory ireo masoivoho rehetra andriamatoa François Hollande dia nanome baiko fa tsy maintsy atao mahazo vahana ny teny frantsay. Tafiditra amin’izany hoy Rodin, ny firenena Malagasy. Araka izany dia tsy mitovy ny zanaka tantsaha sy ireo mianatra any amin’ireny sekoly frantsay ireny. Namaly ny voalazan’ingahy Ratsiraka Elysé ny amin’ny hoe tsy mila tondrozotra, fa diniky ny samy malagasy ihany. Tsy efa tao anatin’ny fitondrana ve ianareo ireo hoy izy ka naninona no tsy natao izany.
Auteur Solo Razafy*Publié le 31 août 2012 Catégories Politique
4 pensées sur “TSY MANAIKY « BILETA TOKANA » HATAO ATSY MAORISY ISIKA !”
tsy eketsika io!aleo eo @imprimerien,tsika eo magro io no atao!blueprint moa io milay be io !saika nisy nandoro iny !rindrina sisa
Efa midika zavatra be dia be izany rehetra izany e!!!
mbola ao ihany ny renikely , mbola tsy misara-nono ihany ny foza e!!!
efa hita fa RENIKELY TSIVANONA mbola LOZORANA nono ihany koa aiza no tsy hitadiavany fika RATSY
hanaposinana ny Gasy indray, ny ratsy tsy kely lalana, asakasak’izay hanaiky mbola ho baikon’izay soavaly
maty ary aloha e!!TSY MAINTSY MITADY HIRIKA FOANA !!!!
lany morce ve e, Any Androy ambany ny taux de scolarite, fa ty ndaty atiky tsy azo ambakaina, Niala-maina ra8 taty tam 2006 fa tsy lany satria fantan’ny ndaty atiky ny habibiany.
Faly miarahaba ny Mpitandrina ary miarry soa sy mampahery amin’ny asan’ny Tompo Marina mihitsy izany izao fa tsy misy firaisantsaina ao amin’ny fiangonana ka mahatonga ny safidy ho samy hafa. Na izany na tsy izany hisy akony foana io fifidianana io na ho ela na ho haingana koa araka ny fitenenana hoe hitsikitsika tsy mandihy foana fa ao raha ary koa ny hoe ny vy tsy mikitrana irery koa noho izany dia tsara ny hifameperana dieny ety am-boalohany amin’ny asa, fomba fiasa, fomba fitondrana ary ny fomba fifampitondrana ao am-piangonana. izany dia manamarina ilay fitenenana hoe mpifankatia tsy mifamepetra ka ady ny hiafarany Manenta,na ary ny tenanay ny hisian’ny fifampiresahan’ny mpitandrina sy ny birao ary ny karazan’olona rehetra ao am-piangonana ahafahana mametraka ny lamina vaovao amin’ny fifampitondrana Izany indrindra no atao dia mba hisian’ny fifampiraharahana mazava alohan’ny hanatanterahana asa iray mba tsy hisian’ny nenina na ny akony ao aoriana Hoy indrindra ny Tompo hoe Tsy ianareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo mba handeha sy hamoha koa tokony ekentsika arak’izany ny fifidianana sy ny valiny ary dia ny fanatanterahana ny asan’Andriamanitra no tena atao marina tokoa Saino ny zavatra any ambony araka izany, isika vahoankan’Andriamanitra dia tokony tsy hametraka ny fepetra ho an’izay zavatra ety an-tany isika Mahereza sy matanjaha ary ary manonona ny fiadanan’ny Tompo ho an’ny vahoakan’Andriamanitra rehetra ao amin’ny fitandremana ambavahadimitafo.SHALOM
Précédent Article précédent : Les colonies anglaises se sont elles mieux sorties de la décolonisation ?
Suivant Article suivant : Eliane NAIKA 2012-08-31 19:51:00